Iziphakamiso eziyisishiyagalombili zikaPierre Rabhi zokuphila ngenkathi unakekela impilo - i-Afrikhepri Fondation
Umhlaba weplanethi yethu ungukuphela kosuku lokuphila okuphela kwalo esikwaziyo enkangala ogwadule olukhulu. Ukuyinakekela, ukuhlonipha ubuqotho bayo obuphathekayo nobokuzalwa, ukusebenzisa imithombo yayo ngokulinganisela, ukwakha ukuthula nobumbano phakathi kwabantu, ukuhlonipha zonke izinhlobo zokuphila, kuwuphrojekthi onengqondo kunayo yonke noma.
Lezi ziphakamiso ezilandelayo zithathwe emhlanganweni wamazwe omhlaba womhlaba kanye nowomuntu, obhalwe nguPierre Rabhi wenhlangano yaseColibris, encwadini yakhe ubheke enenjabulo, eyakhishwa ngo-2010 ngabakwa-Actes-Sud.
Ngaphezu kwemibono nje, lezi ziphakamiso ziphinda zenze imodeli yomphakathi ukunikela ngenye indlela emhlabeni wanamuhla. Ngakho-ke leso sikhathi siyeka ukuba yimali nje, ukuze ukuthula kuthule kube yinto enhle futhi, ukuze umbono wenzuzo engenamkhawulo unikeze ithuba labaphilayo, ukuze ukushaywa kwezinhliziyo zethu kungazwakali njengezinjini ukuqhuma, futhi ekugcineni uphile futhi unakekele impilo.
I-1: I-Agroecology, ngokulima kwezinto eziphilayo nezokuziphatha
Kuyo yonke imisebenzi yabantu, ezolimo zibaluleke kakhulu, ngoba akekho umuntu ongakwazi ukwenza ngaphandle kokudla. I-agroecology esiyikhuthaza njengendlela yokuphila esebenzayo neyezolimo ivumela abantu ukuthi baphinde bazimele, bavikele ukudla kwabo kanye nokuphepha kwabo, ngenkathi benza kabusha futhi balondoloze amafa abo anempilo.
2: Khulisa umnotho ukuze uwunikeze nencazelo
Ukukhiqiza nokudla endaweni kuyisidingo esiphelele sokuphepha kwabantu mayelana nezidingo zabo eziyisisekelo nezisemthethweni. Ngaphandle kokuvala ukushintshana okuhambisanayo, izindawo ziyobe sezisebenza ngokuzimela ezithuthukisa futhi zinakekele izinsiza zabo zasekhaya. Ezolimo zabantu, ezamaciko, amabhizinisi amancane, njll., Kufanele zenziwe kabusha ukuze izakhamizi eziningi ngangokunokwenzeka zikwazi ukwenza umsebenzi wezomnotho.
3: Owesifazane enhliziyweni yeshintsho
Ukugcotshwa kwesifazane ezweni elihlaselayo nelinobudlova besilisa kuhlala kungenye yezingqinamba ezinkulu ekuguqukeni okuhle kwesintu. Abesifazane bathambekele kakhulu ekuvikeleni impilo kunokuyonakalisa. Kufanele sikhonze ukuhlonipha abesifazane, abagcini bempilo, futhi silalele ubufazi obukhona kithi sonke.
4: Ukuzonda okujabulisayo ngokumelene "njalo njalo"
Lapho ubhekene nengcebo engapheli "engaphezulu" engonakalisa iplanethi ukuze usizuze idlanzana, ukukhetha okunengqondo okuphefumulelwe yisizathu. Kungumsebenzi wobuciko nezindinganiso zokuphila, umthombo wokwaneliseka nenhlala-kude enkulu. Limelela isikhundla sezepolitiki kanye nesenzo sokumelana esivuna umhlaba, ukwabelana nokulingana.
5: Enye imfundo ongayifunda ngenkathi umangaza
Sifisa ngayo yonke isizathu sethu nangayo yonke inhliziyo yethu imfundo engasekelwa ekukhathazekeni kokwehluleka kepha emdlondweni wokufunda. Ngubani oqeda “wonke umuntu abe ngowakhe” ukuze aphakamise amandla wobumbano nokuhambisana. Ngubani obeka ithalenta lalowo nalowo ekukhonzeni bonke. Isifundo esilinganisa ukuvuleka kwengqondo ukukhipha ulwazi ngobuhlakani bezandla nokusungula ukhonkolo. Okuxhuma umntwana emvelweni, ayikweleta futhi ezohlala inokusinda kwakhe, futhi okumvusa ebuhleni, kanye nakomthwalo wakhe wemfanelo wokuphila. Kuko konke lokhu kubalulekile ekuphakamiseni ukwazi kwakhe.
I-Utopia akuyona iphupho kodwa “okungeyona indawo” yawo wonke amathuba. Njengoba sibhekene nemingcele kanye nemikhawulo efile yemodeli yethu yokuba khona, kuyindlela yokuphila yonke, ekwazi ukwenza lokho esikubheka njengokunokwenzeka. Izisombululo zangakusasa ziku-utopias sanamuhla. I-utopia yokuqala izofakwa kithi ngokwethu, ngoba ushintsho lomphakathi ngeke lwenzeke ngaphandle koshintsho lwabantu.
7: Umhlaba nobuntu
Sibona emhlabeni, ubuhle obujwayelekile besintu, ukuphela kwesiqinisekiso sempilo yethu nokusinda kwethu. Sizibophezele ngenkuthalo, ngaphansi kokuphefumlelwa yi-humanism esebenzayo, ukufaka isandla ekuhlonipheni kwazo zonke izinhlobo zokuphila kanye nenhlala-kahle nasekugcwalisekeni kwabo bonke abantu. Okokugcina, sibheka ubuhle, ukuhlakanipha, ukungakhethi, ukubonga, ububele, ubumbano njengamagugu abalulekile ekwakheni umhlaba ophumelelayo nowokuphila kubo bonke.
I-8: Umbono wokuphila njengesizathu sokucabanga
Sicabanga ukuthi imodeli evelele njengamanje ayikwazi ukuthuthukiswa nokuthi ukuguquguquka kwepharadesi kubalulekile. Kuyaphuthuma ukubeka abantu nemvelo enhliziyweni yezinto ezisikhathazayo nokubeka yonke imithombo namakhono ethu ekusebenzeni kwabo.
Ukuqalwa - Rudolf Steiner (Audio)